La xiriir - Dukaamada eGay
Siyaasadda Qarsoodiga Khaaska ah
Nidaamkan Qarsoodiga ah wuxuu sharxayaa sida macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed loo uruuriyey, loo isticmaalay, loona wadaagay markii aad booqatay ama aad ka iibsanayso egay.shop ("Site").
Macluumaadka Shakhsiyadeed ee aanu soo uruurino
Markaad booqato bogga, waxaan si toos ah u soo aruurineynaa macluumaad ku saabsan qalabkaaga, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan barta internetka, cinwaanka IP, aagaga waqtiga, iyo qaar ka mid ah cookies oo lagu rakibay qalabkaaga. Intaa waxaa dheer, marka aad eegto bogga, waxaanu ururinaa macluumaadka ku saabsan boggaga internetka ama alaabooyinka aad u aragtid, boggaga internetka ama shuruudaha raadinta kuu soo gudbiyay Bogga, iyo macluumaadka ku saabsan sida aad ula macaamilayso Bogga. Waxaan tixraacaynaa macluumaadkan si toos ah loo ururiyay "Macluumaadka Aaladda".
Waxaan soo aruurineynaa Macluumaadka Aaladda iyadoo la isticmaalayo teknoolajiyada soo socda
- "Kukiyada" waa faylasha macluumaadka ee lagu rakibay qalabkaaga ama kombiyuutarka waxayna badanaa ku jiraan aqoonsi gaar ah oo qarsoodi ah. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan kukiyada, iyo sida loo xakameeyo cookies, booqo http://www.allaboutcookies.org.
- "Geli faylasha" ficilada dabagalka ee Site, oo ururiya xogta ay ku jiraan cinwaankaaga IP, nooca browser, bixiyaha adeegga internetka, bogagga tixraaca / ka baxa, iyo taariikhda / saacadaha.
- "shabakadaha shabakada", "tags", iyo "pixels" waa faylasha elektarooniga loo isticmaalo si loo qoro macluumaadka ku saabsan sida aad u aragto bogga.
Marka lagu daro marka aad iibsanayso ama isku dayeyso inaad iibsato bogga, waxaan ku soo aruurineynaa qaar ka mid ah macluumaadkaaga, oo ay ku jiraan magacaaga, cinwaanka biilka, cinwaanka maraakiibta, macluumaadka lacag bixinta (oo ay ku jiraan lambarrada kaararka deynta), cinwaanka email, iyo lambarka taleefanka. Waxaan u gudbineynaa macluumaadkaan "Warbixinta Dalabka".
Marka aynu ka hadalno "Macluumaadka Shakhsi" ee Siyaasaddaan Khaaska ah, waxaannu ka hadlaynaa labada Macluumaadka Aaladda iyo Dalabka Macluumaadka.
Sidee baan u isticmaalnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed?
Waxaan isticmaalnaa Xogta Amarka ah ee aan ku soo aruurinno guud ahaan si aan u fulino wixii amarro ah ee lagu meeleeyay Site (oo ay ku jirto hawlgelinta macluumaadkaaga lacag bixinta, diyaarinta maraakiibta, iyo ku siinaya qaansheegasho iyo / ama xaqiijinta xaqiijinta). Intaa waxaa dheer, waxaanu u isticmaalnaa Macluumaadka Sameeya:
- Inuu la xidhiidho;
- Keeno amarradeena khatarta ama khiyaanada; iyo
- Marka la eego doorashooyinka aad nala wadaagto, waxaan ku siinaynaa macluumaad ama xayeesiin la xiriira alaabtayada ama adeegyadayada.
Waxaan isticmaalnaa Macluumaadka Qalabka ah ee aan soo uruurinno si aan nooga caawino shaashadda khatarta iyo khiyaamada khatarta ah (gaar ahaan, cinwaanka IP-gaaga), iyo guud ahaan guud ahaan si loo hagaajiyo loona hagaajiyo boggayaga (tusaale ahaan, soo saarista falanqeyn ku saabsan sida ay macaamiishayadu ula socdaan oo ula falgalaan Site, iyo si loo qiimeeyo guusha ee suuqgeynteena iyo ololeyaasha xayaysiinta).
Wadaagista Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed
Waxaan la wadaagnaa macluumaadkaaga shakhsiyadeed ee dhinacyada saddexaad si ay nooga caawiyaan inaan isticmaalno Macluumaadkaaga Shakhsiga, sida kor ku xusan. Tusaale ahaan, waxaan u adeegsanaa Shopify si ay u awoodaan dukaanka online - waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan sida Dakhliga u isticmaali Macluumaadka Shakhsiyeed halkan: https://www.shopify.com/legal/privacy. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa Google Analytics si aan u fahamno sida ay macaamiisheena u isticmaalaan Site - waxaad ka akhrin kartaa wax badan oo ku saabsan sida Google u isticmaalayo Macluumaadka Shakhsiyeed halkan: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Waxaad sidoo kale ka saari kartaa google Analytics halkan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ugu dambeyntii, waxaan sidoo kale la wadaagi karnaa Macluumaadkaaga Shakhsiga si ay u hoggaansamaan shuruucda iyo xeerarka khuseeya, inay ka jawaabaan amar maxkamadeed, baaritaan baaritaan ama codsi kale oo sharci ah oo ku saabsan macluumaadka aan helno, ama si kale u ilaalino xuquuqdeena.
Sida kor lagu sharaxay, waxaan isticmaalnaa Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed si aan kuu siino xayaysiisyada la beegsanayo ama isgaarsiinta suuq-geynta annaga oo rumaysan in laga yaabo in ay xiiseyneyso. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida xayeysiisku ujeeddadu tahay, waxaad booqan kartaa bogga waxbarashada ee NAI "http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Waxaad ka saari kartaa xayeesiinta la beegsanayo adigoo isticmaalaya xiriirka hoose:
- Boog: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
Intaa waxaa dheer, waxaad ka diidi kartaa qaar ka mid ah adeegyadan iyagoo booqanaya Digital Advertising Alliance's portal-ka-ka-joojinta ee: http://optout.aboutads.info/.
Ha la socon
Fadlan ogow inanaan wax ka bedelin xog ururinta macluumaadka boggayaga oo isticmaalno farsamooyinka markaan aragno calaamad aan ka aragto shabakadaada.
Haddii aad tahay degane yurub ah, waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa hayno kuna weydiisano in macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed la saxo, la cusboonaysiiyo, ama la tirtiro. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku dhaqanto xuquuqdaan, fadlan nala soo xiriir adoo isticmaalaya macluumaadka xiriirka hoose.
Intaa waxaa dheer, haddii aad tahay degane Yurub waxaan la soco in aan ka baaraandegidda macluumaadkaaga si ay u gutaan heshiisyo aan laga yaabaa in aad la ah (tusaale ahaan haddii aad bixiso amar marayo Site ah), ama haddii kale inay ku baaqaan in danaha our ganacsi sharci ah kor ku xusan. Intaa waxaa dheer, fadlan ogow in macluumaadkaaga la bedeli doono meelo ka baxsan Yurub, oo ay ku jirto Kanada iyo Mareykanka.
Markaad amar ku bixiso Bogga, waxaanu ku sii wadi doonnaa Xogtaada Sarraynta ee diiwaankeena illaa iyo intaad naga codsanaysid inaad tirtirto macluumaadkan.
Waxaa laga yaabaa in aan dib u cusbooneysiiyo siyaasaddan gaarka ah ee waqti-galinta si aan u turjunno, tusaale ahaan, isbeddel ku yimaada waxqabadkayaga ama sababaha kale ee sharciyeed, sharci ama sharci.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan habdhaqanka asturnaanta, haddii aad qabtid su'aalo, ama haddii aad rabto inaad sameyso cabasho, fadlan nagala soo xiriir adoo gujinaya HALKAN.
Ku soo dhawoow maanta
Ma u baahan tahay talo qaar? Su'aal ku saabsan amarkaaga? Ma rabtaa inaad noqoto qof aad wada shaqeyn kartaan? Fariin noogu soo dir si aan kuu soo jawaabno sida ugu dhakhsaha badan!
magaca Email Message
Adoo saxeexaya sanduuqkan iyo soo gudbinta foomkan, waxaan ku raacsanahay in xogta shakhsi ahaaneed loo isticmaali doono si mar kale aniga ila soo xiriiri doono marka la eego codsigeyga ku cad foomkan. Daaweyn kale laguma samayn doono macluumaadkeyga. Si aad u ogaato oo aad u isticmaasho xuquuqdaada, oo ay ku jirto inaad ka noqoto ogolaanshahaaga isticmaalka macluumaadka ururiyay foomkan, fadlan na tasho Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Hubi kiiska kore